Amakhwapha achetyiweyo, ewe okanye hayi? | Amadoda aQinisekileyo
Ihlobo lisondela ngendlela engenakuphepheka. Yonke imihla kuya kushushu (ubuncinci apha eValencia) kwaye elinye lamathandabuzo athi amadoda amaninzi azibuze kulo lonke ihlobo liyavela, Ngaba ndichebe amakhwapha? Sihlala sikwenza oko ngenxa yezizathu ezibini, okanye ukunqanda ukubila okungathandekiyo ekhwapheni okanye ngokuthanda ubuhle. Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke kwiimpawu zethu zomzimba.
Ukuba kwimeko yakho ungomnye wabo ukhupha isixa semizi-mveliso ngumbilo ngomzamo omncinci, ukuyekisa ayisiyonto ilungileyo. Ngenxa yokuba iinwele zisebenza njengomqobo kwaye ziyakwazi ukugcina ukubila. Kule meko, kucetyiswa kuphela ukunciphisa iinwele kule ndawo. Ukuba ingxaki igqithile, kukho izisombululo eziqhubeka ngakumbi. Isisombululo esinye sinokubakho Inaliti yebotox ukuvimba iziphelo zemithambo-luvo ezenza ukubila.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ungomnye wabo ayibilo kakhulu, kodwa ivumba elibi alinyamezeleki, kuyacetyiswa ukuba kuthathwe i-wax kwaye unyaka wonke, hayi ehlotyeni kuphela. Uya kuqaphela ukuba ubile kancinci, kodwa ukuba ivumba lomzimba lincitshisiwe kakhulu. Kwakhona, okokuqala kufuneka uvume ukuba kubuhlungu kakhulu, kodwa oku kulandelayo akukho buhlungu kangako, Logama nje ungaziyeki iinwele zikhule kakhulu endaweni.
Okokugqibela, ukuba ungomnye wabo banethamsanqa Ababisi kakhulu okanye ukubila kwabo kunamandla kakhulu, ndiyavuyisana nawe, unokwenza nantoni na oyithandayo. Ukuba uthatha isigqibo sokungawunciphisi ubuncinci, kuyaxabiseka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Amakhwapha achetyiweyo, ewe okanye hayi?
Ungawukhangela njani umsebenzi kwi-Intanethi?
I-Timberland, iAventura yasentwasahlobo-ihlobo 2010 ingqokelela